YEYINTNGE(CANADA): Wednesday, June 19
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအတွင်း တည်ဆောက်လျက်ရှိသည့် ရွှေဂုံတိုင် ခုံးကျော်တံတားကို နိုဝင်ဘာနှင့် ဘုရင့်နောင် ဂုံးကျော်တံတားကို ဒီဇင်ဘာအတွင်း အပြီးတည်ဆောက် သွားမည်ဟု ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ မြို့တော်ဝန် ဦးလှမြင့်က ပြောကြား
အဆိုပါ ခုံးကျော်တံတားများဖြစ်သည့် ရွှေဂုံတိုင်နှင့် ဘုရင့်နောင်တံတား စီမံကိန်းတွင် ကုန်ကျမှုများကို ပြည်ထောင်စုအဆင့်မှ ဘတ်ဂျက်ဖြင့်
ဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေကြောင်း မြို့တော်ဝန်ထံမှ သိရှိရသည်။
ရွှေဂုံတိုင် ခုံးကျော်တံတား တည်ဆောက်ရာတွင် ကျပ် ၁၇ ဘီလီယံနှင့် ဘုရင့်နောင် ခုံးကျော်တံတား တည်ဆောက်ရာတွင် ကျပ် ၂၆ ဘီလီယံ ကုန်ကျမည်ဟု ခန့်မှန်းထားကြောင်း သိရှိရသည်။
အဆိုပါ ခုံးကျော်တံတားများ တည်ဆောက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ မြို့တော်ဝန် ဦးလှမြင့်က "အခု ဒီတံတားတွေ ပြီးစီးဖို့ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ခန့်မှန်းထားတာတော့ ယခုနှစ်ရဲ့ နိုဝင်ဘာနဲ့ ဒီဇင်ဘာအတွင်း ဖြစ်တယ်။ ဘုရင့်နောင် ခုံးကျော်တံတားကတော့ သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်း အဆင့်ဆင့် ပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်။ ရွှေဂုံတိုင် ခုံးကျော်တံတားကတော့ တည်ဆောက်တဲ့ အခါမှာ ကြန့်ကြာမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်နေတယ်။ အဓိကကတော့ တည်ဆောက်တဲ့အခါမှာ အသုံးပြုတဲ့ စက်ယန္တရားကြီးတွေနဲ့ ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းတွေ ထားဖို့နေရာ အခက်အခဲနဲ့၊ ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ အဆောက်အအုံတွေနဲ့ ငြိစွန်းနေတဲ့အတွက် ခဏခဏပြန်ပြီး ဒီဇိုင်းဆွဲနေရတာကြောင့် ဖြစ်တယ်" ဟု ပြောကြားသည်။
သက်ဆိုင်ရာမှ ခုံးကျော်တံတားများ တည်ဆောက်ရခြင်း၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်မှာ ယာဉ်ပိတ်ဆို့မှုများ လျော့ကျစေရန် ဖြစ်သော်လည်း ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအတွင်း ခုံးကျော်တံတားများ တစ်ပြိုင်နက်တည်း ဆောက်နေခြင်းနှင့် ကြန့်ကြာနေမှုများကြောင့် ခရီးသွားပြည်သူများနှင့် ယာဉ်မောင်းများက အခက်အခဲများနှင့် ကြုံတွေ့နေရကြောင်း သိရသည်။
ရန်ကုန်မြို့အတွင်း အငှားယာဉ်ဖြင့် စီးပွားရှာနေသည့် ကိုမင်းနိုင်က "တံတားတွေ မပြီးသေးတဲ့အတွက် တံတားမဆောက်ခင်ကထက် လမ်းတွေပိုပြီးတော့ ပိတ်ဆို့ပါတယ်။ ယာဉ်မောင်းအများစုဆိုရင် ရွှေဂုံတိုင်မီးပွိုင့်ကို ဖြတ်ပြီးတော့ သွားရမယ့်ခရီးမျိုးတွေဆိုရင် မလိုက်ချင်ကြတော့ဘူး။ အချို့ရက်တွေဆိုရင် ရွှေဂုံတိုင်မီးပွိုင့်မှာ နာရီဝက်လောက် စောင့်ရတဲ့နေ့တွေ ရှိပါတယ်" ဟု သုံးသပ်ပြောကြားခဲ့သည်။
အလားတူ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်မှ တာမွေမြို့နယ်သို့ နေ့စဉ်လိုင်းကားစီး၍ အလုပ်ဆင်းနေသူ ကိုလတ်က "ရုံးဆင်းရုံးတက် အချိန်ဆိုရင် ကားပေါ်မှာ ခရီးသည်တွေက အများကြီးပါလို့ ကျပ်ကျပ်တည်းတည်း ထိုင်နေရတဲ့အပြင် ကားတွေပိတ်လို့ အကြာကြီး စောင့်ရတဲ့ဒုက္ခက နှစ်ပေါက်နေပါပြီ" ဟု သုံးသပ်ပြောကြား ခဲ့သည်။
ခုံးကျော်တံတားများကို မိုးရာသီ မတိုင်မီ ရာခိုင်နှုန်း အများစု ပြီးစီးရန် သတ်မှတ်ခဲ့သော်လည်း လက်တွေ့တွင် သတ်မှတ်ထားသည့် ရာခိုင်နှုန်းအတိုင်း ပြီးစီးမှု မရှိခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 6/19/20130အကြံပြုခြင်း
I'm doingavery important job today.... Cooking for my dad and his friends for the first time in my life! I'm very nervous; oh my god! Wish I could cook lasagne!
I have been waiting for this day foralong long time!
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 6/19/2013 1 အကြံပြုခြင်း
ထိုင်းက မြန်မာ အစိုးရ ဆီက ဆင်ဖြူတော် ငှားတာကို မြန်မာ ငြင်းဆန်
19 ဇွန်လ 2013 - 22:02
ဆင်ဖြူကို အထူးပြု ထုတ်တဲ့ မြန်မာ ငွေစက္ကူအင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံ ဘာလီကျွန်းမှာ ဇွန်လ ၁၃ ရက်က လုပ်တဲ့ အရှေ့ အာရှနဲ့ လက်တင် အမေရိက ဖိုရမ်မှာ ထိုင်း ဒုတိယ ဝန်ကြီးချုပ်၊ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး နဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးတို့ သီးခြား ဆွေးနွေးခဲ့ ကြပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲမှာ ထိုင်း ဝန်ကြီး ဆူရာပေါင်း က ဇင်းမယ် တိရစ္ဆာန်ရုံမှာ ပြဖို့ မြန်မာ ဆင်ဖြူတော်ကို ၆ လ ငှားရမ်းဖို့ မြန်မာ ဝန်ကြီး ဦး ဝဏ္ဏမောင်လွင် ကို ကမ်းလှမ်း ခဲ့ပါတယ်။
ဆက်စပ်သတင်းနဲ့ အစီအစဉ်များမြန်မာ ရွှေ့ပြောင်းသမားတွေရဲ့ ကျန်းမာရေး ထိုင်းဖြေရှင်းမယ်
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ထိုင်းတွေ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ တိုက်တွန်းဆက်စပ်အကြောင်းအရာများအာဆီယံထိုင်း မြန်မာ သံတမန် ဆက်ဆံရေး ၆၅ နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အဖြစ် ထိုင်းဘက်က ငှားရမ်းတာလို့ ဆိုပါတယ်။ဆင်ဖြူတော်ကို သံတမန်ကောင်း တယောက်ရဲ့ အမှတ် သင်္ကေတ အဖြစ် သဘောထားပြီး အခုလို ငှားရမ်းတာ လို့လည်း ဆိုပါတယ်။တရုတ် နိုင်ငံက ပန်ဒါဝက်ဝံကို သံတမန် အဖြစ် သင်္ကေတ ပြုခဲ့ ဖူးသလို ထိုင်းနဲ့ မြန်မာ ကြားမှာ ဆင်ဖြူတော်ကို သင်္က࿿တေပြု ငှားရမ်းဖို့ ကမ်းလှမ်းတာ ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ မြန်မာ အစိုးရ ဘက်က ဆင်ဖြူတော် ငှားရမ်းရေး ကို ငြင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။ဆင်ဖြူတော်ကို ဇင်းမယ် အထိ ပို့ဆောင်ရမှာ အခက်အခဲ ရှိပြီး ဆင်ဖြူတော်ရဲ့ ကျန်းမာရေး ကို စိုးရိမ်လို့ မငှားတာလို့ အကြောင်းပြ ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံက ဆင်ဖြူကို ကြည့်ဖို့ ထိုင်းနိုင်ငံသား တွေ အတွက် အထူး လေယာဉ် ခရီးစဉ်တွေ စီစဉ်ပေး မယ်လို့ သမ္မတရုံး ဝက်ဘ်ဆိုက် စာမျက်နှာ မှာ ဖော်ပြ ထားပါတယ်။ဒီလို စီစဉ်ခြင်း အားဖြင့် ခရီးသွား လုပ်ငန်း တိုးတက်နိုင်တယ် လို့လည်း မြန်မာ ဘက်က ဆိုပါတယ်။ထိုင်းနဲ့ မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့ အစိုးရတွေဟာ ဆင်ဖြူတော်ကို သာမန် တိရစ္ဆာန် အဖြစ် သဘော မထားဘဲ ဘုန်းကျက်သရေ တိုးစေတဲ့ အရာ ဆိုတဲ့ ရှေးဆန်တဲ့ အယူအစွဲ ထားရှိ ကြသူတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ပဒေသရာဇ် ခေတ်အဆက်ဆက် က အယူအဆ ဟောင်းကို ဆက်လက် စွဲကိုင် ထားကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်း ပဒေသရာဇ် ဘူမိဘောမှာ စုဆောင်းထားတဲ့ ဆင်ဖြူ ၁ဝ ကောင် ရှိပြီး မြန်မာနိုင်ငံ မှာတော့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ လက်ထက်မှာ ဆင်ဖြူတွေကို ရှာဖွေ စုဆောင်း လာခဲ့တာ အခုဆိုရင် ဆင်ဖြူ ၈ ကောင် ရှိပါတယ်။သိပ္ပံပညာ ရှုထောင့်ကနေ လေ့လာ သုံးသပ်သူ တွေကတော့ ဆင်ဖြူဆိုတာဟာAlbinoလို့ခေါ်တဲ့မျိုးရိုးဗီဇ ဖောက်ပြန်မှု ကြောင့် ရောဂါ ဖြစ်ပွား နေတဲ့ သတ္တဝါ တမျိုးလို့ ဆိုပါတယ်။
အမေရိကန်သမ္မတ ဘားရက်အိုဘားမားက မြန်မာနိုင်ငံကို သမိုင်းဝင်ခရီးစဉ်အဖြစ် ရောက်မလာမီ ခြောက်ရက်အလိုက ဂျပန်နိုင်ငံ၊ တိုကျိုမြို့မှာ အနာဂတ် ပထ၀ီနိုင်ငံရေးအတွက် မဟာဗျူဟာမြောက် စကားတစ်ခွန်းကို ပြောခဲ့သည်။
“ကျွန်တော်ဟာ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုရဲ့ ပထမဆုံးပစိဖိတ်သမ္မတဖြစ်တယ်”
ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာထဲက ဟာဝိုင်ယီကျွန်းမှာမွေးသည့် အိုဘားမားက အာရှပစိဖိတ်ဒေသသည် အမေရိကန်တို့အတွက် အချက်အချာအကျဆုံးနေရာဖြစ်ကြောင်း ဒေသတွင်းက မဟာမိတ်များနှင့် ပြိုင်ဘက်များကို သတိပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ပြောရလျှင် ကြီးထွားလှုပ်ရှားလာသည့် တရုတ်နဂါးကို သုတ်ဖို့ပြင်ဆင်သည့် အမေရိကန်လင်းယုန်၏ တပ်လှန့်သံဖြစ်သည်။
အိုဘားမား တိုကျိုမြို့မှာ မိန့်ခွန်းမပြောခင်တစ်နှစ်တိတိအလို ၂၀၁၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလမှာ နိုင်ငံခြား
၀န်ကြီးဟီလာရီကလင်တန်က “အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ ပစိဖိတ် ရာစုနှစ်”ဆိုသည့် ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကို (Foreign Policy) မဂ္ဂဇင်းကြီးမှာ ရေးခဲ့သည်။
“အာရှပစိဖိတ်ဒေသသည် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေး၏ အဓိကမောင်းနှင် အားဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ”ဟု ဟီလာရီက ရေးသားခဲ့သည့်အပြင် "လာမည့် ၁၀ နှစ်အတွင်း ကျွန်မတို့အနေနဲ့ အချိန် နဲ့စွမ်းအင်တွေကို ဘယ်မှာမြှုပ်နှံ မယ်ဆိုတာကို စမတ်ကျကျနဲ့ စနစ် တကျလုပ်နိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်။ ဒါမှ (ကမ္ဘာပေါ်မှာ)ကျွန်မတို့ရဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်မယ်”ဟု မြန်မာနိုင်ငံအပါအ၀င် အာရှပစိဖိတ်နိုင်ငံများ၏ မဟာဗျူဟာမြောက်မှုကို ဖော်ပြခဲ့သည်။
သမ္မတဂျော့ခ်ျဒဗလျူဘွတ်ရှ် လက်ထက်က “အကြမ်းဖက်သမား နှိမ်နင်းရေး”များဖြင့် လုံးချာလည် လိုက်ခဲ့သည့်အတွက် ဒေသတွင်း ကြီးထွားလာသည့် တရုတ်နိုင်ငံ၏ တန်ခိုးသြဇာကို တန်ပြန်အရေးယူမှုအားနည်းခဲ့မှုကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖို့ အရေးတကြီးကြိုးစားလာကြခြင်း ဖြစ်သည်။
အမေရိကန်တို့ အနေနှင့် တရုတ်ကို သေနတ်တစ်ချက်မဖောက်ဘဲ ချုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့က အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့် အာဖရိကရေနံများကို တရုတ်တို့တင်သွင်းရာ မလက္ကာရေလက်ကြားနှင့် အနောက်ပစိဖိတ်ဒေသကို ရေတပ်ဖြင့် ပိတ်ဆို့လိုက်ဖို့ ဖြစ်သည်။
“မလက္ကာပြဿနာ (Malacca Dilemma)” ဟု တရုတ်ခေါင်းဆောင်တို့ ခေါင်းခဲသည့် အနာဂတ် စိန်ခေါ်မှုအတွက် ထွက်ပေါက် Plan B ကို တရုတ်တို့ ဦးနှောက်မုန်တိုင်းဆင်ခဲ့ကြသည်။
၂၀၀၄ ခုနှစ် သြဂုတ်လမှာ ယူနန်တက္ကသိုလ်က ပညာရှင်တစ်စုက မြန်မာနိုင်ငံစစ်တွေမြို့မှ တရုတ်ပြည်ကူမင်းသို့ ရေနံပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းဖို့ ပီကင်းအစိုးရကို စာတမ်းတစ်စောင်တင်ပြခဲ့သည်။ နောင်ဖြစ်လာမည့် ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ် ငွေ့ပိုက်လိုင်းများအတွက်အကြိုစိတ်ကူးဖြစ်ပါသည်။
မလက္ကာရေလက်ကြားကို ပိတ်ဆို့ခံရလျှင် လောင်စာဆက်လက်ရရှိရေး အခြားအစီအမံများအဖြစ် တရုတ်-ရုရှရေနံပိုက်လိုင်း၊ တရုတ်-ကာဇက်စတန်ရေနံပိုက်လိုင်း၊ တရုတ်-ရုရှဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း၊ တရုတ်-တာ့က်မင်နစ်စတန်ဓာတ် ငွေ့ပိုက်လိုင်း၊ တရုတ်-ပါကစ္စတန် ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းနှင့် တရုတ်-မြန် မာရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းတို့ကို သွယ်တန်းဖို့အားထုတ်ခဲ့ကြသည်။
မြန်မာသည် တရုတ်တို့အ တွက် အရေးကြီးသည့် Plan B ဖြစ်လာခဲ့ပြီ။
၂၁ ရာစုကို တရုတ်တို့စိုးမိုးဖို့ အတွက် ပီကင်းကရေးဆွဲသည့် မဟာဗျူဟာက “သမုဒရာနှစ်စင်းမူဝါဒ”(Two Oceans Policy) ဖြစ်သည်။ သဘောက တရုတ်ပြည်၏ အရှေ့ဘက်ကမ်းရိုးတန်းများရှိ ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာနှင့် တောင်ဘက်ရှိ အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာကို ထိန်းချုပ်ထားဖို့ပင်ဖြစ်သည်။ အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာကို ထိန်းချုပ်နိုင်လျှင် အမေရိကန်ရေတပ်၏ ရန်က ရှောင်ကွင်းနိုင်မည့်အပြင် ပြိုင်ဘက်အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုလည်း ဟန့်တားနိုင်မည်ဟု ပီကင်းက တွေးခဲ့သည်။ သို့သော် တရုတ်ပြည်၏ ပထ၀ီအနေအထားက အိနိယ သမုဒရာကို ချုပ်ကိုင်ဖို့အခွင့်အရေး မပေးပါ။ ထိုအခါ တရုတ်တို့
“တောင်ဘက်မျှော်” (Look South) ဗျူဟာကို ထပ်မံရေးဆွဲကြပါသည်။ သဘောကတော့ တရုတ်ပြည်၏ တောင်ဘက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံကတစ်ဆင့် အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာကို ထိန်းချုပ်ဖို့ ဖြစ်ပါသည်။ တရုတ်နိုင်ငံ၏ တောင်ဘက်ရှိ ကုန်းတွင်းပိတ်ဒေသများအတွက် ပင်လယ်ထွက်ပေါက်ရဖို့ မြန်မာနိုင်ငံကို “စင်္ကြံဒေသ” (Transport Corridor) အဖြစ် အသုံးပြုဖို့လွန်ခဲ့သည့် နှစ်အစိတ်ခန့်ကတည်းက တရုတ်ပညာရှင်များ တွေးတောခဲ့ကြသည်။
အမေရိကန်တို့အတွက် တရုတ်ကို ဒေသတွင်း “ပိတ်ဆို့မှု” (Containment) ပြုလုပ်ဖို့ အကောင်းဆုံးနှစ်နိုင်ငံက မြန်မာနှင့် ဗီယက်နမ်ဖြစ်သည်။ နှစ်နိုင်ငံလုံးမှာ တစ်ချိန်က တရုတ်နှင့် စစ်ခင်းခဲ့သော သမိုင်းရှိခဲ့ပြီး ပင်လယ်ထွက်ပေါက် များကိုလည်း ချုပ်ကိုင်ထားကြ သည်။ ၁၇၆၅ မှ ၁၇၆၉ ခုနှစ်အ ထိ ဖြစ်ပွားခဲ့သော တရုတ်-မြန်မာ စစ်ပွဲများမှာ တရုတ်ကျူးကျော်တပ်များကို ဆင်ဖြူရှင်၏ တပ်များက လေးကြိမ်တိုင် အောင်အောင်မြင်မြင် တိုက်ထုတ်ခဲ့ကြသည်ကို ပထ၀ီ နိုင်ငံရေးသမားများ မှတ်မိကြသည်။
အိမ်နီးချင်း ၁၄ နိုင်ငံနှင့် ထိစပ်နေသည့် တရုတ်ကိုယ်တိုင်က ဒီမိုကရေစီမဟုတ်သည့်အတွက် ကပ်လျက်နိုင်ငံများကို ဒီမိုကရက်တစ် ဖြစ်စေချင်သည့် ဆန္ဒရှိဟန်မတူပါ။ သူ့နယ်နိမိတ်နှင့်ကပ်လျက်ရှိသည့် အာဏာရှင်နိုင်ငံများကို လုံခြုံရေး အတွက် ကြားခံနယ်မြေ(Buffer Zone) အဖြစ် မွေးမြူလိုသူဖြစ်သည်။
မရေတွက်နိုင်သည့် ပြဿနာများပေးနေသည့်တိုင် မြောက်ကိုရီးယားကို တရုတ်တို့ မွေးထားရခြင်းသည် ဒီမိုကရက်တစ်ဖြစ်သည့် တောင်ကိုရီးယားနှင့် အိမ်ချင်းမထိစပ်ချင်သည့် မူဝါဒကြောင့်ဖြစ်သည်။
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးသည် တရုတ်နိုင်ငံအတွက် ကြီးမားသည့် အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ယူဆောင်ထားခဲ့သည်။
သို့နှင့် စွမ်းအင်၊ လုံခြုံရေးနှင့် ပထ၀ီနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ အချက်အမျိုးမျိုးက မြန်မာကို တရုတ်တို့အတွက် အရေးကြီးဆုံးသော့ချက်နေ ရာတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ တွန်းပို့ခဲ့ကြသည်။
တရုတ်နှင့် အမေရိကန်တို့၏ ပထ၀ီနိုင်ငံရေးကစားပွဲတွင် မြန်မာသည်အရေးပါသည့် ကျားကွက်တစ်ခုဖြစ်လာပါသည်။ အခြားအရေးပါသည့် ကစားသမားများအဖြစ် အိန္ဒိယနှင့် ဂျပန်တို့လည်း ကြိုးဝိုင်းအတွင်းကို ၀င်ရောက်လာခဲ့ကြပါပြီ။ “အာရှပစိဖိတ်ခေတ်”မှာ မြန်မာရှေ့တန်းက နေရာရဖို့ကြိုးပမ်းအားထုတ်သင့်သည်။ အမေရိကန်ကို အ လွန်အမင်းတိမ်းညွှတ်သည့်အတွက် ရုရှ၏ ကျူးကျော်မှုကိုခံခဲ့ရသည့် ဂျော်ဂျီယာ၏ သင်ခန်းစာကို ယူသင့်သလို တရုတ်ကို အလွန်အမင်းတိမ်းညွှတ်သည့်အတွက် အနာဂတ်အမှီ အခိုကင်းမှုကို ဆုံးရှုံးရသည့် ကမ္ဘောဒီးယား၏ သင်ခန်းစာကိုလည်း လေ့လာသင့်ပါသည်။ တစ်ဖက်ဖက်ကို လောင်းကြေးအားလုံးချထိုးသည့် ဗျူဟာကို မယုံစားသင့်ပါ။
မြန်မာတို့ ပါးနပ်ဖို့အချိန်ဖြစ်သည်။ ပထ၀ီနိုင်ငံရေးကတော့ ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာရှိနေသည်။ တရုတ်နဂါးနှင့် အမေရိကန်လင်းယုန်တို့ အကြားမှာ မြန်မာ့ဒေါင်းလှလှပပကပြဖို့လိုပါလိမ့်မည်။
မင်းသားနှင့်မင်းသမီးတို့၏ ပွင့်လင်းလွတ်လပ်သော ချစ်ရည်လူးသည့်ဇာတ်ဝင်ခန်းများကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် တစ်နှစ်၊ နှစ်နှစ်အတွင်း ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် ကြည့်ရှုကြရလိမ့်မည်ဟု မည်သူမျှမျှော်လင့်ထားမည်မဟုတ်ပါ။ မြန်မာဇာတ်ကားဇာတ်ဝင်ခန်းအချို့ကို
နိုင်ငံခြားဇာတ်ကားများကဲ့သို့ အမြင်မသင့်တော်သော ဇာတ်ဝင်ခန်းများအား ကြည့်ရလိမ့်မည်ဟုလည်း တွေးဆထားကြမည်လည်း မဟုတ်ပါ။
အသက်မပြည့်သေးသူ မြန်မာမင်းသမီး သရုပ်ဆောင်ထားသော ဇာတ်ဝင်ခန်းအချို့ လူပြောများနေဆဲမှာပင် လင်မယားအတူနေသည့် ဇာတ်ဝင်ခန်းပါ ဇာတ်ကားတစ်ကား ထွက်လာပြန်သည်။ ကြိုဆိုသူ အနည်းစုရှိသော်လည်း ယင်းဇာတ်ကားဖန်တီးသူတို့ ပရိသတ်ကို တောင်းပန်ဖြေရှင်းလာရသည်။
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ဗီဒီယိုဆင်ဆာဖြေလျှော့ပေးမှုအပေါ် အနုပညာဖန်တီးသူများက မယုံမရဲနှင့် မိမိတို့ဖန်တီးချင်သည့် ဇာတ်လမ်းလေးများ သွေးတိုးစမ်းတင်ပြနေရချိန်တွင် လိင်အသားပေးဟုဆိုသော ဇာတ်ကားများ ထွက်ရှိလာခြင်းကြောင့် ရရှိထားသည့် လွတ်လပ်ခွင့်ကို အဆုံးရှုံးမခံနိုင်သူတို့ စိုးရိမ်ပူပန်လာကြသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် မြန်မာဗီဒီယိုဆင်ဆာအဖွဲ့ကလည်း ယဉ်ကျေးမှုနှင့် မသင့်လျော်သည့် ပြကွက်များကို ပိုပိုတင်းကျပ်တော့မည်ဟု စကားဦးသန်းလာပြီဖြစ်သည်။
“အဲဒါမှမရရင် ခွေကို ဈေးကွက်ထဲက ပြန်သိမ်းတဲ့အထိ အရေးယူပါမယ်။ အိပ်ရာခန်းတွေကို လိုအပ်လို့ထည့်တာကထည့်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် မူဝါဒသတ်မှတ်ထားတာကို ကျော်ပြီးရိုက်ရင် ပထမထောက်ညွှန်မယ်။ မရရင်ဒီအခန်းတွေကို ဖြတ်တောက်ရမယ်”” ဟု မြန်မာဗီဒီယိုဆင်ဆာအဖွဲ့မှ အဖွဲ့ဝင် ဦးခင်မောင်ချင်းက ပြောသည်။
တင်းကျပ်သည့် ဆင်ဆာမူဝါဒဟု မြန်မာအနုပညာရှင်တို့ ပြောဆိုဝေဖန်ခဲ့သော ဆင်ဆာခေတ်သည် လွန်ခဲ့သည့် တစ်နှစ်ခွဲတွင် အဆုံးသတ်သွားခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ဆင်ဆာအဆီးအတားမရှိတော့သည့်နောက် “ဘယ်လိုကားတွေ ရိုက်လာကြမှာလဲ”” လို့ ပရိသတ် က မေးခွန်းမထုတ်နိုင်သေးခင်မှာပင် သရဲတစ္ဆေဇာတ်ကားများ တရစပ်ထွက်ရှိလာသည်။ ယင်းနောက်မှာတော့ နောက်ခံအချစ် သီချင်းဖွင့်ပြီး ပန်းခြံထဲတွင် ပြေးလွှားနေသော ချစ်သူစုံတွဲများ၊ ပန်းပွင့်လေးပေါ် လိပ်ပြာနား၍ ၀တ်ရည်သောက်သုံးနေသည့် တင်စားချက်ပြကွက်များ နေရာတွင် မြန်မာမင်းသားနှင့် မင်းသမီးတို့ အကြင်နာပေးခြင်း (နှုတ်ခမ်းချင်း ထိတွေ့နမ်းရှုတ်ခြင်း)၊ လင်မယား ခုတင်ပေါ်က ဇာတ်ဝင်ခန်းအချို့ နေရာယူလာသည်။
လွတ်လပ်ခွင့်ပေးလိုက်ချိန်တွင် ယခင်က မရိုက်ခဲ့ရသော ဆင်းရဲမွဲတေသည့် သရုပ်မှန်စရိုက်၊ မီးပြတ်သည့်အကြောင်း၊ ကုန်ဈေးနှုန်းမြင့်တက်သည့်အကြောင်း၊ အစိုးရဌာနပိုင်းဆိုင်ရာ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု၊ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုစသည်တို့ကို အနုပညာဖြင့် ပြောင်မြောက်အောင် ဖော်ထုတ်သည့်ဇာတ်ကားများ ထွက်မလာခဲ့ဘဲ သရဲကားများနှင့် နမ်းရှုတ်သည့် ဇာတ်ကားများထွက်လာခြင်းမှာ ဆင်ဆာလွတ်လပ်ခွင့် တဖွဖွတောင်းသူတို့ပင် မျက်စိလည်ကုန်သည်။
“ကျွန်မ ဆင်ဆာလွတ်လာခွင့်ရတာနဲ့ ကိုမြအေးနဲ့ ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ရဲ့ ၀တ္ထုတွေ ဗီဒီယိုရိုက်တယ်။ အောက်ခြေလူတန်းစား မိသားစုဘ၀တွေကို အရင်က မရိုက်ခဲ့ရသမျှ အတိုးချရိုက်ကူးတယ်။ ဒါကို ပရိသတ်ကလည်း အားပေးကြတာတွေ့ရတယ်။ ပရိသတ်တောင့်တတာက ဇာတ်လမ်းဆန်းသစ်တာလို့ ကျွန်မထင်ပါတယ်” ဟု ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်နှင့် ကိုမြအေးတို့၏ ၀တ္ထုများကို ဗီဒီယိုဇာတ်ကားပြန်လည်ဖန်တီးခဲ့သူ ဒါရိုက်တာ ကြည်ဖြူသျှင်က ဆိုသည်။
“အခု မြန်မာကားမှာက နှုတ်ခမ်းချင်းနမ်းလိုက်တာကိုပဲ အနမ်းခံရတဲ့ မင်းသမီးက အသေးစိတ်ပြန်ခံစားပြနေတယ်။ ဒါကို ကလေးတွေအတုယူမှားနိုင်တယ်။ လွတ်လပ်ခွင့်ရလာတဲ့အခါ ရှေ့ဆက်သွားရမှာကို မဟုတ်တမ်းတရားတွေရိုက်ပြီး လွတ်လပ်ခွင့်ကို အဆုံးရှုံးခံကြတော့မှာလား။ ပြောရင်တော့ ခင်ဗျားကြီးက အသက်ကြီးလို့ မရိုက်ရဲတိုင်းပြောတယ် ဖြစ်မယ်။ ကလေးတွေအတွက် စဉ်းစားပါ” ဟု ချစ်တင်းနှောခန်းများ မပါပါက အနုပညာမမြောက်ဆိုသည့် ရှုထောင့်ကို လက်မခံသည့် ဒါရိုက်တာမောင်တင်ဦးကဆိုသည်။
ထိုအချက်ထဲက လွတ်ရင်ပြီးရော မောင်နှင့်နှမ၊ သားနှင့်အမိ အတူကြည့်လို့ မသင့်သည့် မြန်မာဇာတ်ကားများ ထပ်မထွက်လာစေရန်အတွက် ဆင်ဆာပြန်လည်တင်းကျပ်သည့်စနစ်ကိုတော့ ရုပ်ရှင်လောကသားအားလုံးက ခါးခါးသီးသီး ကန့်ကွက်နေကြသည်။ ထို့ပြင် နိုင်ငံတကာ ရုပ်ရှင်ဈေးကွက်များကဲ့သို့ အသက် ၁၈ နှစ် အောက်ကလေးများ မကြည့်ရဆိုသည့် အဆင့်သတ်မှတ်သည့်စနစ် (Rating) မှာလည်း မြန်မာ့လူမှုဝန်းကျင်နှင့် လတ်တလောပြုလုပ်ရန် လုံးဝလွယ်ကူဦးမည်မဟုတ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး ဥက္ကဋ္ဌအပါအ၀င် လောကသားအများစုက ဆိုပြန်သည်။
ထိုသို့ဆိုလျှင် နောက်ထပ်ညစ်ညမ်းပါသည်ဆိုသည့် လင်မယားအတူနေဇာတ်ဝင်ခန်းများ၊ သမီးရည်းစား အကြင်နာပေးသည့် ဇာတ်ဝင်ခန်းများမပါအောင်၊ အနုပညာဖန်တီးသူများကိုလည်း မပွန်းပဲ့အောင် မည်သို့ဖန်တီးကြမည်နည်း။ အဖြေကို ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး၏ ဥက္ကဋ္ဌရာထူးကို မကြာမီက ရရှိခဲ့သည့် သရုပ်ဆောင်ဒါရိုက်တာ ဦးလူမင်းက ပေးပါသည်။
“မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုတဲ့ နေရာမှာ မြန်မာတွေလည်း ချစ်တတ်တာပါပဲ။ ဒါကြောင့် ချစ်ခန်းကြိုက်ခန်းတွေကို သဘာဝကျပြီး အမြင်မရိုင်းအောင်တော့ ဖန်တီးမယ့်သူတွေက ကြိုးစားပေးသင့်ပါတယ်။ “မျက်လုံးလေးကလယ်ကလယ်” ဇာတ်ကားမှာကတည်းက Rating စနစ်လိုနေပြီလို့ ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပေမယ့် လတ်တလောလုပ်ဖို့ လုံးဝအဆင်မပြေပါဘူး” ဟု လူမင်းက ပြောသည်။
အသက် ၁၈ နှစ်အောက် ကလေးများမကြည့်ရဟု တံဆိပ်ကပ်နှိပ်လိုက်ပါက အသက် ၁၈ နှစ်အောက်မပြည့်သေးသည့် ထိုကလေးအများစုကပင် ယင်းဇာတ်ကားများကို ရွေးချယ်ကြည့်ရှုသွားလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ထပ်မံပြောကြားသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ လူဦးရေ၏ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းမှာ မြို့စွန်နှင့် ကျေးလက်နေလူတန်းစားများ ဖြစ်နေပြီး ၎င်းတို့မှာ အခကြေးငွေယူ၍ ပြသကြသည့် ဗီဒီယိုရုံများ၊ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကြီးများတွင် ပြသသည့် မြန်မာဇာတ်ကားများ ကို အားထားကြည့်နေကြရသည်။
“ကျော်ဆွေသေနတ်ပြောင်းပြန်ထမ်းတာတွေ့ပြီး အားကျပြီး ကျွန်တော်လည်း သေနတ်ပြောင်းပြန်ထမ်းလိုက်တာ တပ်ထဲမှာ အဆူအကြိမ်းခံလိုက်ရတာပဲ။ ဒါဘာကိုပြလဲဆိုတော့ ခင်ဗျားတို့မှာ ပရိသတ်အများကြီးရှိတာပဲ” ဟု မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးသို့ ယမန်နှစ်က လာရောက်ခဲ့သည့် သမ္မတရုံးပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း၏ စကားမှာ သမားရိုးကျချစ်ကြိုက်ကွဲညားကို ဆန်းသစ်အောင် လိင်အသားပေးဇာတ်ဝင်ခန်းများ ထည့်သွင်းရိုက်ကူးသူတို့ စဉ်းစားသင့်သည့်အချက်ဖြစ်နေသည်။
“မင်္ဂလာဦးညကို ရင်ခုန်အောင် ရိုက်ပြရမယ်ဆိုရင်တော့ အထိတွေ့လေးတွေ၊ အနမ်းလေးတွေပါသင့်တာပေါ့။ ကြည့်တဲ့သူတွေမှာလည်း အကြည်ဓာတ်လေး လိုတယ်လေ။ ခက်တာက လိုတာထက်ပိုပြနေတာပဲ။ စွတ်လုပ်နေရင် ရထားတဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်လေး ပြန်ဆုံးရှုံးမှာစိုးတယ်” ဟု ဒါရိုက်တာဝိုင်းက ဆိုသည်။ သို့သော် သူက ဇာတ်ကားများအဆင့် သတ်မှတ်သည့် စနစ်ကို ထောက်ခံသူလည်းဖြစ်သည်။
“ရေရှည်ကို ကြည့်ပါ။ လတ်တလောအဆင်ပြေအောင် အဲဒီအခန်းဖြတ်ဆိုတာ မလုပ်နဲ့တော့။ နိုင်ငံတကာကို သွားမယ်ဆိုရင် Rating က အကောင်းဆုံးပဲ။ စစချင်းခက်မှာပဲ။ ဘယ်အလုပ်မဆို ခက်မှာပဲ” ဟု ၀ိုင်းက ဆိုသည်။
လောကသားအများစုမှ စိုးရိမ်သလို ဆင်ဆာပြန်လည်တင်းကျပ်သည့်စနစ်ကိုတော့ မပြုလုပ်လိုကြောင်း ဆင်ဆာအဖွဲ့ဝင် ဦးခင်မောင်ချင်းက ကတိပြုသော်လည်း မူဝါဒခြောက်ချက်နှင့် ငြိစွန်းလာလျှင်တော့ နောက်နောင်ညှာတာတော့မည်မဟုတ်ဟု ဆိုသည်။
ပြည်ပက မိတ်ဆွေများက အကြိမ်ကြိမ် မေးနေကြပါတယ်။ ပြည်ပလေ့လာရေး ခရီးထွက်ဖို့ ပထမဆုံး အကြိမ်အဖြစ် ကြိုးစားတဲ့ ဗီဇာ ရပြီလား တဲ့။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ရက်က ထိုင်း နိုင်ငံ ဗီဇာ သွားလျောက်ပါတယ်။ အေဂျင်စီ က တောင်းတဲ့ အိမ်ခြံမြေ တိုက် ကား ပိုင်ဆိုင်မှု နှစ်ခုကို မပြနိုင်တာနဲ့ ဗီဇာ မရခဲ့ပါလို့။ ကြားပွဲစားတွေရှိမှန်း သိပါတယ်။ ပွဲစားခ တစ်သိန်းခွဲ မပေးနိုင် မပေးချင်လို့ မလျောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံက မြန်မာ သံရုံးမှာ ထိုင်းလူမျိုးတွေ ဗီဇာ လာလျောက်တဲ့ အခါ ကျနော့်လိုပဲ အိမ်ခြံမြေ တိုက် ကား ပိုင်ဆိုင်မှု နှစ်ခုကို ပြခိုင်းပါသလား သိချင်မိတယ်။
ဒါမှ မဟုတ် ဒို့ မြန်မာတွေကို သိပ် နှိမ်တာလား။
တိုက်ကား၊ အိမ်၊ ခြံမြေ ဆိုတဲ့ စည်းစိမ် ရုပ်ဝတ္တုပိုင်ဆိုင်မှု ချမ်းသာမှုတွေ ရှိတဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံသားကိုပဲ ပြည်ဝင်ခွင့် ဗီဇာ ပေးမယ်လို့ တသမတ်တည်း သဘောတားသလား
မြန်မာ နိုင်ငံသားတွေကို ယခုလို နှိမ်ချ အဆင့်အတန်းခွဲပြီး အိမ်ခြံမြေ တိုက် ကား ပိုင်ဆိုင်မှု နှစ်ခု ရှိသော သူကိုသာပြည်ဝင်ခွင့် ပေးမည်ဟူသော ကန့်သတ်ချက်ဖြင့် ဗီဇာ ထုတ်ပေးသော စနစ် ရှိနေသမျှ ထိုင်း ( ယိုးဒယား ) နိုင်ငံသို့ ကျနော် ဗီဇာ လျောက် နိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
ထို့ကြောင့် ပြည်ပမှ မိတ်ဆွေများအား တောင်းပန်လိုက်ပါသည်။ ဖိတ်ခေါ်ခြင်း အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ လတ်တလော အားဖြင့် လေ့လာရေး ခရီး မထွက်နိုင်သေးပါ။
သို့သော် မြန်မာ နိုင်ငံသားများကို အဆင့်အတန်း နှိမ်ထားသည့် အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံ အတွက် မိမိတို့ နိုင်ငံပေါ် အထင်အမြင် သေးသိမ်သည့် သုံးသပ်ချက်များ ပပျောက် သွားသည် အထိ မိမိတို့ နိုင်ငံကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲ တိုးတက်မှုများ ရရှိလာရန် မိမိတို့ မြန်မာနိုင်ငံသားများတွင် ပိုမို လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်နေပြီ ဟု သုံးသပ်ချက် ရရှိရန် တွန်းအားပေးသော ထိုင်းနိုင်ငံ ပြည်ဝင်ခွင့် မူဝါဒ စနစ်အား ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း
မြန်မာပြည်ကို အထင်မြင် သေးသော နိုင်ငံတကာ အလယ် ပြန်လည် ဂုဏ်ဝင့်ထယ်လာဖို့ မိမိတို့ နိုင်ငံသားအားလုံး တက်ညီလက်ညီ စုပေါင်းကာ တိုင်းပြည် တိုးတက်ရေး ကြိုးစားကြရတော့မည့် အချိန်ဖြစ်ပါသည်။
ဓါတ်ပုံ ကျော်သူရကိုကို...အန် အယ်ဒီ
တောင်ကြီး ၊ ဇွန် ၁၉
တောင်ကြီးမြို့မှ အသက်(၇)နှစ်အရွယ် ပထမတန်းကျောင်းသူကို ၀ါယာကြိုးနှင့် ရိုက်မှုဖြင့် အုပ်ထိန်းသူအား လူမှုဝန်ထမ်းမှ တရားစွဲဆို ထားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ယနေ့တွင် တောင်ကြီးမြို့ အမက(၁၅)သို့ ကျောင်းကျန်းမာရေးက ကလေးများ၏ ကျန်းမာရေးကို သွားရောက်စစ်ဆေးစဉ် ပထမတန်းကျောင်းသူ မသက်ထားခင် ၏ ကျောပြင်နှင့် ခြေထောက် တစ်လျှောက်၌ အကွင်းလိုက်ပေါ်နေသော ဒဏ်ရာများကို တွေ့ရှိ ရသဖြင့် တောင်ကြီင်္းမြို့ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးနှင့် ရဲစခန်းတို့ကို ကျောင်း ကျန်းမာရေး မှ အထက်တန်းသူနာပြု ဒေါ်စောဥမ္မာနှင့် ကျောင်း တာဝန်ရှိသူများက တိုင်ကြားခဲ့ကြောင်း၊
ယင်းတိုင်ကြားချက်အရ ကလေးငယ်အား မေးမြန်းရာ သူမ၏ ကြီးတော်နှင့် အမ၀မ်းကွဲတို့က ၀ါယာကြိုးနှင့် ရိုက်နှက်ထားသည်ဟု ဆိုကြောင်း၊ ပြည်နယ်လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးမှ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးတင်အောင်ရီက ပြောသည်။
ယင်းနှင့်ပတ်သက်၍ တောင်ကြီးရဲစခန်းသို့ ပေါ်ပြူလာနယူးစ်မှ ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ရာ တာဝန်မှူးက “ဒီအမှုက ကလေးသူငယ်ဥပဒေအရ ရဲအရေးပိုင်တဲ့အမှု မဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့် လူမှုဝန်ထမ်းကနေပြီး တရားစွဲဆို အမှုတင်လိုက်ပါပြီ” ဟု ပြောသည်။
ရိုက်နှက်ဆုံးမသည်ဟု သံသယရှိသူ မသက်ထားခင်၏ ကြီးတော်နှင့်အစ်မ၀မ်းကွဲကို ရဲစခန်းတွင် ထိန်းသိမ်းထားကြောင်း ၄င်းက ဆက်ပြောသည်။
မသက်ထားခင်၏ ဖခင်မှာ ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်ပြီး မိခင်ဖြစ်သူမှာ ညောင်ရွှေ တွင် ရှိသည်ဟု ကြားရသော်လည်း ယခုအချိန်အထိ ဆက်သွယ် ၍ မရသေးကြောင်း ဦးတင်အောင်ရီက ပြောသည်။